विकास, मण्डली र संघसंस्था; परीवर्तनको शुरुवात कहाँबाट गर्छौ ? – NepalChurch.com
पेरुको उत्तरी प्रान्तमा एउटा जनजातीको बसोबास छ जसलाई “एमोआई जाती” भनेर चिनिन्छ। जब सुसमाचार पहिलो पटक त्यस प्रान्तमा आयो, परमेश्वरले त्यहाँका मानिसहरुका बिचमा अचम्म रीतिले काम गर्नुभयो। भौगोलिक दृष्टिकोणले एमोआईहरुको जीवन त्यति सजिलो भने अवश्य थिएन। सिंचाईको सुविधा नभएका कारण खेतीपाती पनि त्यति राम्रो हुदैनथ्यो। फेरि बजारको अभावले गर्दा स्थानिय जनताले जेनतेन गरि उब्जाएको फसलको खपत पनि हुदैनथ्यो। एमोआईहरुको आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो नभए पनि उनिहरुका बिचमा सु-समाचारको प्रभाव भने अति प्रभावकारी नै थियो। यद्यपी आर्थिक अवस्थामा कमजोर भएता पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध र उनीहरुको गवाही भने वरिपरिको समाजमा उदाहरणीय थियो। उनीहरुका मण्डली भवन माटोले नै बनेका थिए। गाउँमा नै उपलब्ध सुकेका घाँस र बाँसद्धारा मण्डली घरका भित्ता र छानाहरु बनेका थिए। तर जे भएता पनि मण्डलीमा मानिसहरु आउने र परमेश्वरको मण्डली बढ्ने प्रक्रिया तिब्र रुपमा भईरहेको थियो। एमोआई जनजातीहरुको एउटा विशेष गुण अथवा सिप थियो। उनीहरु हस्तकलाका सामाग्री निर्माण गर्नमा अति नै निपुण थिए। तर ति सामानहरुले बजार भने पाउन सकेका थिएनन्। जे होस, मण्डलीको वृद्धि र विश्वासीहरुको जीवनमा आत्मिकी जागृति झल्किरहेको थियो।
सन् १९८० को अन्ततिर मिशनरीहरु एमोआई समुदायहरुका माझ आए। उनीहरुले एमोआई समुदाय हस्तकलाका क्षेत्रमा अति नै निपूण भएको र यदि ति सामाग्रीहरुले उचित बजार पाएको खण्डमा एमोआई समुदायको आर्थिक विकास हुनसक्ने सम्भवना देखे। वास्तवमा त्यो राम्रो विचार नै थियो। केहि समय पछि मिशनरीहरु र मण्डलीका अगुवाहरुको बिचमा सर-सल्लाह भयो। सबैको सल्लाह र विचार अनुसार, गाउँका मानिसहरुले हातमा भएको सिप अनुसार सर-सामग्री तयार गर्ने र ती सामाग्रीहरुका निम्ति मिशनरीहरुले बाहिर मुलुकमा बजारको खोजी गर्ने सम्झौता भयो। यस कार्यका निम्ति उनीहरुले एउटा सहकारी संस्थाको शुरुवात गरे। सोच अति नै राम्रो भयो र सबै कार्य प्रक्रियागत तवरले नै भईरहेको थियो। मिशनरीहरुले सामानको निम्ति उचित बजार पनि पाए र स्थानिय मानिसहरुले तयार पारेका सामानहरु अब बाहिर मुलुकमा निर्यात हुन थाल्यो। सहकारीले वास्तवमा धेरै फाईदा गरीरहेको थियो।
तर दुर्भाग्यपूर्ण कुरा, त्यो सहकारी खोलेको २ सालको अन्तरालमा मण्डलीमा ठुलो समस्या आयो। आर्थिकी कारोबारो नमिलेका कारण मण्डलीका अगुवाहरु बिच शंका-उपशंका शूरुवात भयो र त्यसले मण्डली-मण्डली विच नै मतभेद ल्यायो। त्यसको १ साल भित्रै नै त्यो सहकारीलाई बन्द गर्नुपर्यो। अब बजारमा माग भएपनि ती समानहरु नबन्ने भए। ६ साल देखी बढीरहेका मण्डली विस्तारै तहस नहस भयो। आज करिब ३ दशकको अन्तरालमा फेरी मण्डलीको विकास विस्तारै हुन थालेको छ।
१. वास्तवमा समस्याको जड के जस्तो लाग्छ?
२. के सहकारीको शुरुवात गर्नु नै नहुने हो र?
३. के मिशनरीहरुले बजार खोजीदिनु समस्या निम्त्याउनु थियो?
४. सहकारी शुरु भए पश्चात मण्डलीको प्राथमिकता के बनेको थियो?
यस्तो समस्या केवल पेरुमा मात्र होईन, यदि ईमान्दारीले हेर्यौ भने हाम्रो देशमा यस्तै उदाहरण नपाईएला भन्नसकिन्न। परमेश्वरको काम कहिल्यै पनि मानिसको बुद्धिले मात्र गर्नसकिदैन।परीवर्तनको बारेमा परमेश्वरले अति सुन्दर प्रकारले व्याख्या गर्नुभएको छ। यहोशूले यरीहो शहरमा आक्रमण गर्नुभन्दा पहिला एउटा स्वर्गदुतसँग जम्काभेट गरेका छन्। यस घटनालाई बाईबलमा यसरी उल्लेख गरीएको छ। यहोशू उनीकहाँ गएर सोधे, ‘तपाई हामीपट्टि हुनुहुन्छ कि हाम्रा शत्रु पट्टि हुनुहुन्छ।’ अनि त्यस दुतले भने कि, म कतै पनि छैन। उनले फेरि जवाफ दिए, ‘तर परमप्रभूको फौजको कप्तान भएर म यहाँ आएको हुँ। बाईबलीय तरीकाले परीवर्तनको केन्द्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, मानिस हुदैन। तर आजभोली संघसंस्थामा कता कता मानीस हावी भएको पाईन्छ। दुखको कुरा यो समस्याबाट ख्रीष्‍टियान संघसस्थाहरुपनि गुज्रिहेका छन्। हामो परीवर्तनको शुरुवात कहाँबाट गर्छौ?जतिसुकै राम्रो योजना भएपनि या जतिसुकै राम्रो Log-frame भएपनि यदि हामीहरुले चेलापन एंव परमेश्वरको मण्डलीको उद्देश्यलाई हाम्रो काम र योजना सगँसगै लाग्न सकेनौ भने हामी असफल हुन्छौ। एमोआइहरुको समस्या पनि यहि नै थियो। दिमाग र भावनाको घेरामा रहेर सहकारीले धनपैसो त कमाउन सक्यो तर परमेश्वरको डर र बाटो भने सिकाउन सकेन।
हाम्रा असल कामहरुले कत्तिको हृदयको परीवर्तनका कुराहरु गर्दछन्?मिशनरीहरुको प्रयास अति राम्रो हो तर परमेश्वरको उद्देश्यले सहकारीमा ठाउँ पाउन सकेन। जब मण्डलीमा उहाँको डर हुदैन् हामीहरु पनि हावासगसँगै बरालिन पुग्छौं।
यसकारण भाइ हो, परमेश्‍वरको कृपालाई ध्‍यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, कि तिमीहरूको आत्‍मिक उपासनाको रूपमा आ-आफ्‍ना शरीरलाई पवित्र र परमेश्‍वरलाई ग्रहणयोग्‍य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। २ यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्‍नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित होओ, र परमेश्‍वरको असल, ग्रहणयोग्‍य र सिद्ध इच्‍छा के हो, त्‍यो तिमीहरूले जाँच्‍न सक। रोमी १२;१-२
यहाँ “आफ्‍नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित होओ” भनि लेखिएको छ। अर्थात हृदयको परीवर्तनको कुरा आउछ। आज हाम्रो समाजमा रहेका संघसस्थाहरुमा हामिहरूले पनि कतै परीवर्तन या रुपान्तरणलाई केवल दिमाग (सोचाई) र भावनासम्म मात्र सिमीत राखेका छौ कि? कतै हामी तेस्रो तहसम्म नपुगि बाहिरमात्र रुमलिरहेका छौ कि? यो प्रश्न आज हामी सबै ख्रीष्‍टियान संघसंस्थाहरुले आफैसँग सोध्नु पर्ने हुन्छ। समाजलाई मनको नवीकरणको आवश्यकता छ र त्यसको निम्ति मण्डली एक महत्वपुर्ण हतियार नै हो।त्यसैले कतिपटक यसका निम्ति ख्रीष्‍टियान संघसस्थाहरुलाई मण्डलीले सशक्त पार्नपर्ने अवस्था छ।